အောက်တိုဘာလတွင် တရုတ်နိုင်ငံ၏ စမတ်ဖုန်း ရောင်းချ မှု-Apple နံပါတ် တစ် နှင့် OPPO နံပါတ် နှစ် - Pandaily
Categories: Smartphones ကိုPandaily နိုဝင်ဘာ 29, 2021 နိုဝင်ဘာ 30, 2021 မှာ Posted
အရစျေးကွက် သုတေသန အေဂျင်စီ CINNO Research မှ ထုတ်ပြန်သော နောက်ဆုံး စစ်တမ်း အစီရင်ခံစာပြီးခဲ့တဲ့ သောကြာနေ့က တရုတ် စမတ်ဖုန်း ဈေးကွက်မှာ အရောင်း ရ ဆုံး ထိပ်တန်း အမှတ်တံဆိပ် ၅ ခု ထဲမှာ အက်ပဲ လ် ဟာ တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် တိုးတက် လာသလို တစ်လ ထက် တစ်နှစ် ပိုမို မြင့်တက် လာကာ iPhone 13 နဲ့ လစဉ် ရောင်းအား ထိပ်ဆုံး ကို ပြန်လည် ရောက်ရှိ လာကာ ရောင်းအား အလုံး ရေ ၂. ၆၇ သန်းခန့် နဲ့ အောက်တိုဘာလ စမတ်ဖုန်း အရောင်း ရ ဆုံး ချန်ပီယံ ဆုကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။
Apple ၏ iPhone 13 စီးရီး များသည် Apple ၏ ရောင်းအား သည် တစ်လ ထက် ၃၂. ၅% တိုးတက်ခဲ့ပြီး တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် ၄၃. ၆% တိုးတက်ခဲ့သည်။ အောက်တိုဘာလ တွင်၎င်း၏ ရောင်းအား သည် ၆. ၅ သန်းအထိ မြင့်တက်ခဲ့ပြီး ယခင် လ ထက် ၇၈% တိုးတက်ခဲ့ပြီး တစ်နှစ်လျှင် ၁၅၅% တိုးတက်ခဲ့သည်။
IPhone 13 Series မ်ား အေရာင္းအ၀ယ္ သြက္ ေနျခင္းေၾကာင့္ အျခား အမွတ္တံဆိပ္ ေလး ခုမွာ ယခင္ လ ထက္ က်ဆင္း ခဲ့ၿပီး OPPO သည္ ေစ်းကြက္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေျခအေနကို အေတာ္ အတန္ တည္ၿငိမ္ ေအာင္ ထိန္းသိမ္း ထားကာ Apple ၏ ေနာက္တြင္ ဒုတိယ ေနရာ၌ ရပ္တည္ ေနသည္။ ချစ်ပ် ပြတ်လပ် မှုသည် Apple နှင့် Xiaomi တို့၏ စမတ်ဖုန်း ထုတ်လုပ်မှု စွမ်းရည် ကိုထိခိုက် ခဲ့ပြီး OPPO နှင့် Vivo ကဲ့သို့သော ကုန်အမှတ်တံဆိပ် များ သည်သူတို့၏ ရင့်ကျက် ။ တည်ငြိမ်သော ထောက်ပံ့ရေး ကွင်းဆက် စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် ကြောင့် ထုတ်ကုန်များ ၏ပုံမှန် ကြားဖြတ် ခြင်းနှင့် ထုတ်လုပ်မှု စည်း ချက်ကို သေချာစေသည်။ OPPO ဟာ Find X3 Photographer Edition ကတစ်ဆင့် High-end နေရာမှာ ဆက်လက် ရပ်တည် နေပြီး အသစ် ထွက် ရှိတဲ့ Reno7Series တွေကလည်း OPPO ရဲ့ စတုတ္ထ သုံးလပတ် ရောင်း အားကို မြှင့်တင် ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:ပေါက်ကြား မှု အသစ်-Xiaomi 12 စမတ်ဖုန်း ရဲ့ Mini Edition
CINNO Research မှ လေ့လာသုံးသပ် သူများက Huawei Glory စမတ်ဖုန်း ရောင်းအား သည် အောက်တိုဘာလတွင် ၆% ကျဆင်းသွား သော်လည်း တစ်နှစ် ပြီး တစ်နှစ် တိုးတက်မှု အနည်းငယ် ကိုပြသ ခဲ့ပြီး တရုတ်နိုင်ငံ၏ ထိပ်တန်း Android စမတ်ဖုန်း ရောင်းအား တွင် တစ်နှစ် ပြီး တစ်နှစ် တိုးတက်မှု တစ်ခုသာ ဖြစ်ပြီး အဓိကအားဖြင့် တတိယ သုံးလပတ်တွင် ဈေးကွက် သို့ ၀ င်ရောက် ခဲ့သော Glory Play5စီးရီး နှင့် Magic3 စီးရီး များ ကြောင့်ဖြစ်သည်။